downloads 7 850
Onodi ntu na ọzụzụ. Dị Na 3 repaints onye "NASA".
Ụda olu dị gbazie m. Listen na engine ike! Dị mma nke ukwuu na-efe efe, ma dịtụ ngwa ngwa. The Lockheed T-33 T-Bird bụ a ugboelu. Ọ e mepụtara Lockheed ma mee ya nke mbụ ya ụgbọ elu na 1948, piloted site Tony LeVier.
Onye edemede: Piglet Conrad